Homeसमाचारसाराले स्विकारिन सुशान्तसँगको आफ्नो प्रेम सम्बन्ध
September 27, 2020 admin समाचार 12235
सुशान्त सिंह राज’पुतको विषयमा ड्र ग्सको विषयम जोडिएपछि एसन’सीबीले बलिउडकर्मीले ड्र ग्सको प्रयोग गरेको पत्ता लगाउन खोजिरेहेको छ । रिया चक्रव’र्तीसमेत ६ जनालाई न्यायिक हिरासतमा लि’एपछि एनसी’बीले दिपिका पादु’कोण, श्रद्धा कपुर, सारा अलि खान र रकुल प्रीत सिं’हसँग सोधपुछ गरिसकेको छ ।
एनसी’बीले गरेको सोध’पुछको क्रममा सारा अलि खानले आफुले ड्र ग्स लिएको अस्विकार गरेकी छिन् । श्रद्धा कपुरले जस्तै साराले पनि आफुलाई ड्र ग्स वि’वादबाट टाढा राख्न कोशिश गरेकी छिन् । उनले एन’सीबीलाई आफुले ड्र ग्स कहिल्यै सेवन नगरेको तर २०१८ मा फिल्म केदारनाथको सुर्टि’ङका क्रममा सुशा’न्तसँग नजिक भएकी स्वी’कार गरेकी छन् ।
थाइल्या’न्डको आयर’ल्यान्डमा भएको पार्टीमा सु’शान्तले ड्र ग्स लिए पनि साराले भने एन’सीबी समक्ष सुशान्त पार्टीमा गएपनि ड्र ग्स नलिएको बताएकी थिइन् । साराले सि’गरेट पिएपनि ड्र ग्स भने कहिल्यै नलिएको बताइन् । ड्र ग्स’को बारेमा धेरै तरिकाले प्रश्न गरेपनि एन’सीबीलाई साराले कहिल्यै पनि आ’फुले ड्र ग्स सेवन नग’रेकोमा जोड दिइरहिन् ।
January 25, 2021 admin समाचार 5207
May 13, 2021 admin समाचार 4172
May 16, 2021 admin समाचार 4468
प्राणवायु अक्सिजनको मह’त्व कति छ? यसको अभावमा नेपालीले कस्तो सास्ती भोग्नु परेको छ भनेर धेरैलाई थाहा न’हुन सक्छ । पछिल्लो समय महा’मारीका कारण अक्सिजनको नेपालमा चरम अभाव भएको छ । धेरै अस्पतालमा बिरामीहरु यही प्राण
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227682)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220618)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220462)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217537)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216565)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215257)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (213966)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (213896)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182362)